‌နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ကိုကိုးကျွန်းကို ရုတ်တရက်သွားခဲ့ရခြင်း နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရင်း – အနုပညာရပ်ဝန်း
အမေရိကန်တရုတ် စစ်ဖြစ်ခဲ့သည်ရှိသော် မြန်မာနိုင်ငံကြား မညှပ်‌စေဖို့ အမေစုက အပြေးလွှား ကိုကိုးကျွန်းကို သွားခဲ့တယ်။
တရုတ်ကိုတိုက်ဖို့ ဘဂ်လားပင်လယ်အော် တခုလုံး စိုးမိုးပြီး နေရာယူထားကြတဲ့ ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားအကြီးဆုံးနိုင်ငံ US ရဲ့ လေယဉ်တင်သဘော်တွေ ရေငုတ်သဘော်တွေ. ဖရီဂိတ်တွေ အမေရိကန်၊ ဗြိတိသျှ တပ်သားများနှင့်အများဆုံးက အိန္ဒိယရေတပ်မတော် ရဲ့ တပ်သားများပါဝင်နေတဲ့ US ရေတပ် ဦးဆောင်မှု နဲ့စစ်ရေးလေးကျင့်မှု နဲ့ စစ်ပြင်နေချိန်ပါ။
အမေရိကန် တရုတ် စစ်ပွဲဖြစ်တော့မဲ့အချိန်မှာ.. အိန္ဒိယက.. ကိုကိုးကျွန်းမှာ တရုတ် ရေတပ်စခန်းထိုင်ထားတယ်လို့ အတိကျပြောနေပါတယ်။ တကယ်စစ်ဖြစ်ခဲ့ရင် မြန်မာပြည်ဟာ အမေရိကန်တရုတ်စစ်ပွဲမှာ ကြားညှပ်မှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။
အဲဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပိုင် ကိုကိုးကျွန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အမေစုကိုယ်တိုင်သွားပြီး ကမ္ဘာကြီးကို မက်စေ့ချ်ပေးလိုက်တယ်လို့ ပြောရမှာပါခင်ဗျ။
အသက် ၇၀ ကျော် အဖွားအိုက နိုင်ငံအတွက် မမောမပန်းဘဲ အာဏာကို ပြည်သူ့လက်ထဲအပ်ချင်လို့ ကြိုးပမ်းနေချိန်မှာ အနှောက်ယှက်တွေရှိတာ မဆန်းဘူးဆိုပေမယ့် ကို့အမေ.. အဖွားအရွယ်ကို.. ငါတကောဆဲဆိုနေကြသူ‌တွေ ကိုပြောချင်တယ် ကျေးဇူးမတင်ချင်နေ ကျေးဇူးမကန်းကြပါနဲ့။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ အသိမရှိ မိုက်မဲတာက အရေးမပါပေမယ့် ဒီအဖွားကြီးက ခင်ဗျားတို့အခုလို ‌အေးအေးဆေးဆေး ဆဲလို့ရအောင် တိုင်းပြည်ကို ကမ္ဘာ့စစ်မီးတွင်းထဲ ခုန်ချမသွားအောင် ကယ်တင်ပေးနေတယ်ဆိုတာ သိထားဖို့တော့ လိုလိမ့်မယ်။ပေါက်ကွဲတော့မယ့် မီးတောင်ဆိုတာ တားလို့မရဘူး လွတ်အောင်ရှောင်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်ကြပါ။ တကမ္ဘာလုံးက တန်ဘိုးထားတဲ့ အမေစုက. ရှင်တို့စစ်တိုက်တာ ကျွန်မတို့ကို ဆွဲမထဲ့ပါနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နိုင်ငံ ဒီနေရာ ကိုကိုးကျွန်းစုလေးက မြန်မာပိုင်ပါ လို့ကမ္ဘာကြီးကိုကိုတိုင်သွားရောက်မက်စေချ်ပေးလိုက်တာပါခင်ဗျာ
အမရေိကနတြရုတြ စဈဖှဈခဲ့သညရြှိသောြ မှနမြာနိုငငြံကှား မညှပြ‌စဖေို့ အမစေုက အပှေးလှှား ကိုကိုးကွှနြးကို သှားခဲ့တယြ။
တရုတကြိုတိုကဖြို့ ဘဂလြားပငလြယအြောြ တခုလုံး စိုးမိုးပှီး နရောယူထားကှတဲ့ ကမျဘာ့စဈအငအြားအကှီးဆုံးနိုငငြံ US ရဲ့ လယဉေတြငသြဘောတြှေ ရငေုတသြဘောတြှေ. ဖရီဂိတတြှေ အမရေိကနြ၊ ဗှိတိသွှ တပသြားမွားနှင့အြမွားဆုံးက အိနျဒိယရတပေမြတောြ ရဲ့ တပသြားမွားပါဝငနြတေဲ့ US ရတပြေ ဦးဆောငမြှု နဲ့စဈရေးလေးကငွ့မြှု နဲ့ စဈပှငနြခွေိနပြါ။
အမရေိကနျ တရုတျ စဈပှဲဖွဈတော့မဲ့အခြိနျမှာ.. အိန်ဒိယက.. ကိုကိုးကြှနျးမှာ တရုတျ ရတေပျစခနျးထိုငျထားတယျလို့ အတိကပြွောနပေါတယျ။ တကယျစဈဖွဈခဲ့ရငျ မွနျမာပွညျဟာ အမရေိကနျတရုတျစဈပှဲမှာ ကွားညှပျမှာ သခြောသလောကျပါပဲ။
အဲဒီတော့ မှနမြာနိုငငြံရဲ့အပိုငြ ကိုကိုးကွှနြးဖှဈတယဆြိုတာကို အမစေုကိုယတြိုငသြှားပှီး ကမျဘာကှီးကို မကစြေ့ခွပြေးလိုကတြယလြို့ ပှောရမှာပါခငဗြွ။
အသကြ ၇၀ ကွောြ အဖှားအိုက နိုငငြံအတှကြ မမောမပနြးဘဲ အာဏာကို ပှညသြူ့လကထြဲအပခြငွလြို့ ကှိုးပမြးနခွေိနမြှာ အနှောကယြှကတြှရှေိတာ မဆနြးဘူးဆိုပမယြေ့ ကို့အမေ.. အဖှားအရှယကြို.. ငါတကောဆဲဆိုနကှသေူ‌တှေ ကိုပှောခငွတြယြ ကွေးဇူးမတငခြငွနြေ ကွေးဇူးမကနြးကှပါနဲ့။
ခငဗြွားတို့ရဲ့ အသိမရှိ မိုကမြဲတာက အရေးမပါပမယြေ့ ဒီအဖှားကှီးက ခငဗြွားတို့အခုလို ‌အေးအေးဆေးဆေး ဆဲလို့ရအောငြ တိုငြးပှညကြို ကမျဘာ့စဈမီးတှငြးထဲ ခုနခြမွသှားအောငြ ကယတြငပြေးနတယေဆြိုတာ သိထားဖို့တော့ လိုလိမ့မြယြ။
ပေါကကြှဲတော့မယြ့ မီးတောငဆြိုတာ တားလို့မရဘူး လှတအြောငရြှောငရြမယဆြိုတာ နားလညကြှပါ။ တကမျဘာလုံးက တနဘြိုးထားတဲ့ အမစေုက. ရှငတြို့စဈတိုကတြာ ကွှနမြတို့ကို ဆှဲမထဲ့ပါနဲ့ ကွှနမြတို့ရဲ့ နိုငငြံ ဒီနရော ကိုကိုးကွှနြးစုလေးက မှနမြာပိုငပြါ လို့ကမျဘာကှီးကိုကိုတိုငသြှားရောကမြကစြခြွပေေးလိုကတြာပါခငဗြွာ။ (မောငလြှငြ)
“ အင္ဒိုနီးရွားၾကားဝင္ေစ့စပ္မႈ CRPH ကုလကိုယ္စားလွယ္...
“မေမေ့ကို မထိနဲ့နော်” ဒုညွှန်မှူးရဲ့ ဇနီးကို...
စစ္ေကာင္စီ၏ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေမာင္လြင္...